Dhisidda Mawduucyo Isku-dhafan oo leh Hubspot | Martech Zone
Dhismaha Mawduucyo Isku-dhafan oo leh Hubspot
Talaado, Oktoobar 6, 2015 Isniin, Maarso 25, 2019 Douglas Karr
Waxaan nahay dad aad u qurux badan marka ay timaado dhufto ee suuqgeynta otomaatiga, horumarinta bogga soo degida iyo suuqgeynta iimaylka. Waan shaqeynay oo waxaan helnay shahaadada Hubspot dhowr sano ka hor, waana la dhacsan nahay som astaamaha, laakiin walxaha naqshadeynta ayaa xoogaa xaddidan. Arrintu mar dambe sidaas ma aha.
Mid ka mid ah kafaala qaadayaashayada, FatStax, ayaa lagu bilaabay Hubspot laakiin ma hirgelin dhammaan xulashooyinka. Sida bilowgyo badan, waxay ka shaqeynayeen horumarinta ganacsiga umana helin waqti ay si buuxda ugu fuliyaan xalka, sidaa darteed waxay na weydiisteen caawimaad qayb ka ah barnaamijka suuq geynta guud. Toddobaadkii la soo dhaafay, waxay bilaabeen Barnaamijka Wada-hawlgalayaasha ee hay'adaha inay isdiiwaan geliyaan, waxayna ahayd tallaabaddeenii ugu horreysay ee aan ku dhiseyno qaab iyaga u gaar ah.
Waxay bixiyeen qaab HTML ah, waana inaan u turjunno taas Hubspot. Waan yara yara feejignaaday markii hore, waxaan ogeysiiyey inay ogaadaan inaan sameyn doono inta ugu badan ee aan siin karno nidaamka imtixaanka. Hubspot. Furaha soosaarida shaxanka waxay ahayd inaan iskuxidhno shaxanka oo aan uga faa'iideysano dalabyada kale iyo bogagga soo degitaanka Waxay ahayd inaan si sax ah u qabanno… si kooxda FatStax ay wax uga beddeli karto innaga oo aan naga caawin.
Kadib markaan barto madasha oo aan wakhti ku qaatay Goobta Kheyraadka Naqshadeeye ee Hubspot, waxaan si dhab ah ula dhacsanay isku xirnaanta adeegsadaha iyo lakabyada qoto dheer. Annaga oo aan si faahfaahsan u fahmin, ma aanan helin wax xaddidaad ah oo ku saabsan nidaamkooda wax lagu daweynayo haba yaraatee.
Natiijadu waxay ubaahantahay xoogaa yar oo isbedel ah, laakiin way dhaaftay filashadeenii (iyo macmiilkeenii). Xaqiiqdii, waxaan rumeysanahay inaan kaliya sameynay hal CSS wax ka bedel si aan u helno shaxanka oo si buuxda u shaqeynaya - waa kuwan waxa u eg
Tags: hubspotnaqshadeeye hubspottemplate hubspothabspot templating